Ndeapi Jobho Anodiwa Nemutengi Wako Chigadzirwa Kana Sevhisi Kuti Uite? | Martech Zone
Ndakaenda pachiitiko chikuru nezuro chinonzi iyo Innovation Summit, iyo yakaiswa naIndy-based TechPoint. Clayton Christensen, mutauri, purofesa, uye munyori kubva kuHarvard University akataura nezve Zvinokanganisa Innovation uye vakaita basa rinoshamisa. Imwe yemapoinzi ayo aakanangisa kune chakazotevera chikamu chehurukuro yake yaive yekufunga kuti ibasa ripi iro mutengi wako anoda chigadzirwa chako kana sevhisi yekuita.
Akapa muenzaniso wekusvetwa mukaka uye kuti, kuburikidza nekutsvaga mumusika, nzvimbo yekudyira yakagamuchira zvakanakisa nezve kuravira, zvigadzirwa, nezvimwewo, nekuda kwemukaka wavo. Mushure mekuita shanduko zvichibva pakutsvaga kwavo havana kuona shanduko mukutengesa. Mushure mekumwe kutsvagurudza Christensen nechikwata chake vakaona kuti vanhu vaitenga milkshakes mangwanani kutora nguva panguva yavo yekufamba kwenguva refu uye kuvapa huwandu hwenzara kuguta kwenzara kudzamara vadya zvakare.
Iyoresitorendi yanga ichiedza kuita kuti milkshakes ive nani kukwikwidzana nemamwe mukaka, asi vatengi vavo vanga vasingatarise kukwikwidzana kwemukaka, vaida mukaka kuti vaite basa rekuparadza nguva uye kupa zvishoma nzara. Saka rairo yakaitwa naChristensen nechikwata chake yanga isiri yekuravira mukaka, asi asi a gogo zunza kuti uone kuti ichapfuura nemufambo wese!
Sevashambadziri chinangwa chedu ndechekutsanangudza vatengi vedu - isu tinowanzovaisa mumabhaketi zvichibva pahuwandu hwevanhu, maitiro evashandisi uye mamwe mapoinzi epa data pasina kutora nhanho kumashure nekubvunza kuti ibasa ripi iro mutengi wangu anoda kuitwa? Uye, chigadzirwa changu kana sevhisi inoita kuti basa riitwe?
Iwe unogona sei kuona iro basa iro mutengi wako anoda chako chigadzirwa kuti chiite?
Tora online ongororo
Shandisa Social Media kutarisa nekuteerera mashandisiro anoita vatengi chigadzirwa
Rega vatengi vako muenzi blog pane yako blog blog nezve mashandisiro avari kuita sevhisi / chigadzirwa
Vakoke kuti vauye kune yako inotevera webinar uye vape maminetsi gumi ekuratidzira kushandisa kwavo chigadzirwa
Nhasi izuva rakanaka seari kubvunza iwo mubvunzo uye nekutarisa kushambadza kwako uye uone kana iwo maviri ari muchimiro.
Tags: Chandlergoogle analytics nhareisfjistjnzira dzekubatanidzamyers briggsmubairo zvirongwaWordPress